Miroborobo ny voanio mena any Côte d’Ivoire, na dia eo aza ny tsy fisiany ao amin’ny firenena · Global Voices teny Malagasy
Na atao saosy na atao savony, malaza ny voanio mena
Voadika ny 22 Febroary 2020 3:39 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, русский, 日本語, English
Ilay mpivarotra Ivoariana Koffe Pauline sy ny ankohonany mivarotra menaka voanio mena miaraka amin'ny voankazo sy legioma vaovao toy ny mangahazo, mananasy ary papay eny an-tsenan'i Faya any Abidjan, Côte d'Ivoire.
Vao haingana no nanambara ny fikasany hampitombo avo teloheny ny famokarana menaka voanio kanefa tsy manimba hatrany ireo ala zanatany i Côte d'Ivoire, saingy “toa hita fa tsy mitombina” ity drafitra ity noho ny vokatra ambany sy ny fihenan'ny tany (azo volena), araka ny voalazan'ny lahatsoratra avy amin'ny Radio Radio Internationale (RFI) tamin'ny taona 2019.
” Tsy afaka intsony ny maodely tranainy,” hoy i Siaka Coulibaly, solontenan'ny minisiteran'ny fambolena Ivoariana. “Tsy afaka mamokatra betsaka toy ny teo aloha intsony isika, mila maka antoka isika fa mahavokatra kokoa amin'ny velaran-tany kely kokoa ny fambolena efa misy eto amintsika, na dia mila maka ireo tany tsy novolena intsony aza izany”, hoy i Coulibaly tamin'ny RFI.
Iray amin'ireo saosy malaza indrindra ao Côte d'Ivoire ny saosy ‘graine’, vita amin'ny menaka voanio mena, 22 Oktobra 2014, avy amin'i Aboukam tamin'ny alalàn'ny Wikimedia Commons, CC BY 2.0.
Na dia efa iraisam-pirenena aza ny varotra menaka madio dia avy any anaty alan'i Afrika Andrefana no fiavian'ny hazo voanio mena. Ao amin'ity faritra ity, anisan'izany i Côte d'Ivoire, dia mbola maro ny olona mampiasa ny menaka voanio mena tsy voadio, be otrikaina kokoa amin'ny nahandro Ivoariana, toy ny nataon'ireo razambeny ihany.
Totoina tànana na amin'ny laona sy fanoto tsotra, mitoto ilay voankazo mena vonto menaka ny vehivavy Ivoariana ary maka ny menaka mena hatao nahandro avy eo.
Ao an-trano, alain'ny vehivavy ny ranom-boankazo sy ny menaka mba hanaovana saosy matavy antsoina hoe saosy graine. Mihazona ilay singa be otrikaina, manala harafesina ary manamandimandina ny voankazo hatao sakafo ity saosy be menaka ity.
Mitana ny laharana faha-11 manerantany i Côte d'Ivoire amin'ny famokarana menaka voanio voadio, araka ny Indexmundi. Izy no mpamokatra faharoa lehibe indrindra aty amin'ireo firenena Afrikanina, aorian'i Nizeria. Manodidina ny 75 isan-jaton'ny menaka ao Côte d'Ivoire no laniana ao amin'ny firenena – ny ambiny kosa amidy any amin'ireo firenena mifanolo-bodirindrina, hoy ny RFI. Raha ny filana voanio mena ao an-toerana sy ny indostrian'ny varotra no jerena dia mampiasa efa ho 10 isanjaton'ny mponina ao amin'ny firenena ny indostrian'ny menaka voanio.
Raha nandeha tany Côte d'Ivoire i Jeslyn Lemke avy ato amin'ny Global Voices dia niresaka tamin'ireo vehivavy mivarotra menaka voanio mena tany an-tsena sy tamin'ireo olona mampiasa ity menaka voanio mena ity mba hanamboarana savony, araka ny hita ato amin'ity lahatsary fohy ity:
Ao amin'ity tsena maresaka sy be olona ity, matetika amidin'ireo vehivavy eny an-kalamanjana, ao anaty tavoahangy plastika ny menaka voanio mena. Niresaka tamin'ilay mpivarotra Ivoariana Koffe Pauline sy ny ankohonany i Lemke, mivarotra menaka voanio mena miaraka amin'ny voankazo sy legioma vaovao toy ny mangahazo, mananasy ary papay tao amin'ny tsenan'i Faya any Abidjan ilay mpivarotra.
Mivarotra menaka toto tanana amin'ny vidiny mitovy amin'ny 1-2 dolara amerikanina, arakaraka ny habetsany i Pauline, toy ireo mpivarotra hafa eny an-tsena. Tsy toy ny menaka voanio volamena voadio kokoa fa toy ny misy tsironà voatabia ny menaka voanio mena ary ahitana vitamina B betsaka ao aminy sy karotenoida, ilay zavatra miloko volomboasary toy ny hita amin'ny trondro saumon sy ny karaoty.
Nitsidika ozinina fanamboarana savony any an-tanàna itatr'i Divo, Côte d'Ivoire ihany koa i Lemke, izay mamokatra kaba-kuru, savony vita amin'ny menaka voanio mena ary indraindray amin'ny dibera kakao. Ampiasain'ny Ivoariana manokana hanasana fitafiana ity bolongan-tsavony mavo ity ary amidy any amin'ny firenena Afrikana manodidina toa an'i Burkina Faso sy Nizeria ihany koa.
Vehivavy manamboatra savony amin'ny menaka voanio mena any Divo, Côte d'Ivoire. Pikantsary avy amin'ny lahatsary nataon'i Jeslyn Lemke.
Eto, mamatra ny habetsahan'ny ranonà hydroxyde de potassium sy ny menaka voanio mena ny vehivavy. Manafangaro ireo rano roa ireo ny mpiasa, izay mivadika ho patinà savony mavo matevina. Volavolaina ho baolina ny paty raha mbola lena ary halahatra ho maina miaraka amin'ny savony hafa. Mafy tsara hanasana fitafiana ny savony mivaingana saingy mafy loatra raha hanasana hoditra.
Mampihomehy anefa fa misy ny tsy fahampiana menaka voanio ao Côte d'Ivoire ary misy ny fanafarana menaka bebe kokoa avy amin'ny firenena Aziatika izay lohalaharana amin'ny famokarana menaka voanio manerantany.
Mamaritra ny indostrian'ny menaka voanio eran-tany ho toy ny ”ady ‘fifanenjanan-tsandry’ manerantany” ny GroIntelligence, sehatra ara-pambolena iray:
Etsy andaniny, lasa ampahany betsaka amin'ny fiainana andavanandron'ny mpanjifa ny tombontsoa azo avy amin'ny menaka voanio; ary nanampy ny maro hiala amin'ny fahantrana ny indostria. Etsy ankilany, mamela ny fahapotehan'ny tontolo iainana ireo mpamokatra menaka voanio, amin'ny tranga maro.
Mbola miroborobo ao Côte d'Ivoire anefa ny fampiasana menaka voanio mena tsy voadio amin'ny nahandro Ivoariana sy ny famokarana savony kaba-kuru.